jeudi, 11 octobre 2018 22:43
Sambava: Nahazo LP ny Ben'ny Tanàna
Didy navoakan'ny Fitsarana ambaratonga voalohany Antalaha io, manome fahafahana vonjimaika ny Ben'ny Tanànan'i Sambava io.
Fanodinkodinana volam-bahoaka no nanenjehana azy sy mpiasa dimy hafa eo anivon'ny Kaominina Ambonivohitra Sambava.
jeudi, 11 octobre 2018 22:29
Crise au sommet : La voie de la légalité est primée
Aux dernières nouvelles, les 21 candidats dirigés par dame Fanirisoa Ernaivo programmeront de déposer une requête aupres de la HCC demain vendredi avec leurs partisans afin de réviser la liste électorale.
Une éventualité de rejoindre le siège du CENI à Alarobia est à l'ordre du jour.
jeudi, 11 octobre 2018 19:25
Soaloka-Miandrivazo: May ny birao sy fitaovam-pifidianana
Kaominina any amin'ny ilany avaratra andrefan'i Miandrivazo, ary voasokajy ho faritra mena anjakan'ny dahalo i Soaloka.
Misy mpitandro filaminana mampandry tany any an-toerana amin'izao fotoana. Misy manafina ireo olon-dratsy.
Nisy fandorana tanàna voalaza fa fieren'ireo olon-dratsy. May tao anatin'izany ny biraom-pifidianana sy ireo kojakojam-pifidianana.
Noho ity Kaominina ity alavitra sady saro-dalana dia efa nalefa mialoha any ireo fitaovam-pifidianana, nefa izao may izao.
jeudi, 11 octobre 2018 16:10
Politique: Crise au sommet
Les candidats qui se sont réunis ce matin au domicile de l'Amiral Didier RATSIRAKA ont demandé la recomposition de la HCC, du CENI et du gouvernement. Ils donneront rendez-vous à leurs partisans demain à Ambohijatovo et ils planifieront une descente dans la rue.
jeudi, 11 octobre 2018 16:00
Namakia: Novonoiny ny vadiny, nataony fitadiavam-bola
Tovovavy 22 taona novonoin'ny sakaizany tao Namakia ny 3 oktobra teo, ary naleviny tanaty lava-jezika, tsy lavitra ny toerana namonoany azy.
Efa matiny ilay tovovavy vao nantsoiny ny fianakaviany ka hovonoiny ity farany raha tsy manome vola. Azo ny vola iray tapitrisa Ariary tamin'ny findain'ny namany niray tsikombakomba taminy. Izy haka ny vola tany Mitsinjo no nahasarona azy, satria tsy nisy Kioska afaka nakana ilay lelavola iray tapitrisa Ariary tao Namakia.
Nanondro ny namany telo lahy izy, sy ny toerana nandevenany ilay tovovavy izay efa nohazan'ny alika.
Teo ampisamborana ireo telo lahy anefa, nitsoaka ilay lehilahy ka niharan'ny fitsaram-bahoaka.
jeudi, 11 octobre 2018 15:47
Fampielezan-kevitra: Manomboka hafahafa
Voasiotsioka tao Mandoto, nokorontanin'ny omby tao Mahasoabe, voasakantsakana tao Ambalavao Tsienimparihy ny kandida Hery Rajaonarimampianina omaly.
Misy mandrovitra ankitsirano ndray ny afisin'ireo kandida sasany eny amin'ny takelaka natokan'ny CENI ho amin'izany.
Mahazo fandrahonana ireo olontsotra mametraka sarin'ny kandida tohanany amin'ny tranony.
Ny kandida sasany tsy mbola nahazo alalana hampiasa helikoptera hatreto.
Santionany amin'ny tranga misy ireo, efatra andro nanombohan'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena hatao ny 7 novambra 2018.